တနင်္ဂနွေထွက်ပြေးဖို့: ကရမေလ-by-The-ပင်လယ်, ကယ်လီဖိုးနီးယား
ပိုပြီးထက်ရာစုနှစ်၏ချစ်စရာကောင်းသေးငယ်တဲ့မြို့ကရမေလ-by-The-ပင်လယ်ပြင်ဟာလူစည်ကားကယ်လီဖိုးနီးယားကမ်းခြေပေါ်သေးငယ်တဲ့မြို့ hideaway ရှာကြံအနုပညာရှင်များ, စာရေးဆရာများနှင့်နာမည်ကြီးတွေဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ Monterey ဂလားပင်လယ်အော်မြို့မကြာခဏရိုးရှင်းစွာကိုခေါ် "ကရမေလ" ဟုအဆိုပါဇာတ်ဆောင်ဆိုင်များ, အနုပညာပြခန်း, စပျစ်ရည်ကိုအရသာခန်း, စားသောက်ဆိုင်များနှင့်လှပသောအဖြူရောင်သဲသောင်ပြင်စူးစမ်းဖို့ဧည့်သည်များစိတ်အားထက်သန်ဆွဲဆောင်။ အဆိုပါမြို့လယ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့် walkable ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးကြိုဆိုအသေးစား-မြို့ဆုတ်ခွာနေပါပဲ။
ကရမေလဆန်းဟိုဆေးကနေ 80 မိနစ် drive ကိုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဆီလီကွန်ဗယ်လီအနေဖြင့်တစ်ဦးလွယ်ကူသောနေ့ကခရီးစဉ်သို့မဟုတ်တနင်္ဂနွေထွက်ပြေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမြို့ Monterey ဂလားပင်လယ်အော်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုအချို့လာရောက်လည်ပတ်မှုအတွက်အပန်းဖြေအခြေစိုက်စခန်းစေသည်။ ဒါဟာအစမဆိုအဝေးပြေး 1 လမ်းခရီးစဉ်အပေါ်တစ်ဦးအကြီးရပ်တန့်ပါပဲ။
အဓိကတစ်ခုမှာရပ်ရွာ၏ဆှဲမြို့တော်ရဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မြို့လယ်ကမ်းခြေဖြစ်ပါတယ်။ ကရမေလသဲသောင်ပြင်မြို့ရဲ့အဓိကလမ်းမ, သမုဒ်ဒရာရိပ်သာလမ်း၏ခွမှာထိုင်တော်မူ၏။ ကရမေလသဲသောင်ပြင် windswept Monterey ထင်းရူးပင်များနှင့်မတ်စောက်သော, သဲကမ်းပါးများက flanked ကျယ်ပြန့်, အဖြူသဲကမ်းခြေဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းခြေ၏မြောက်ဘက်အဆုံးမှာဒဏ္ဍာရီ Pebble Beach တွင်ဂေါက်ကွင်း Links များမှာကစားဂေါက်သီးကြည့်ရှုရန်ကမ်းပါးထိပ်မှတက်ကြည့်ရှုပါ။
ထိုနေ့၏အားလုံးနာရီခန့်မှာ, သင်ကမ်းခြေတလျှောက်လမ်းလျှောက်ဒေသခံများနှင့်ခွေးနှင့်လှိုင်းကစားလေးတွေရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ စပျစ်ရည်ကိုတစ်ပုလင်းဆောင်ကြဉ်းနှင့်ပြပွဲ (အရက်ကမ်းခြေပေါ်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်) နဲ့တွဲမှ - ကမ်းခြေနေဝင်ချိန်မှာအထူးသဖြင့်လူကြိုက်များနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်ပတ် (ကြာသပတေးနေ့မှတဆင့်တနင်္လာနေ့) စဉ်အတွင်းမြို့ကမ်းခြေကိုမီးရှို့နေပုံများတောင်ဘက် 10 ရိပ်သာလမ်း၏ခွင့်ပြုပါတယ်။
အထက်ကနေရှုမြင်ဘို့, ရှုခင်းသာဖြီး Path ကိုပဲရမေလတောင်သဲသောင်ပြင်အထက်ရှုခင်းသာလမ်းမတစ်လျှောက်တွင်အလုပ်လုပ်သောရှည်လျားသောကျောက်စရစ်နေသောလူသွားလမ်းထွက်စစ်ဆေးပါ။ ကမ်းခြေဆင်းရရန်, လမ်းတစ်လျှောက်တွင်ရှစ်ကမ်းခြေလှေကားတဦးတည်းကိုအသုံးပြုပါ။
ယာဉ်ရပ်နားအဖြစ်ကောင်းစွာ, ကမ်းခြေတွေအများကြီးထဲမှာအခမဲ့ဖြစ်ပြီး Camino ရီးရဲလ်နှင့်ရှုခင်းသာလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်လမ်းယာဉ်ရပ်နားရှိသေး၏။ သမုဒ္ဒရာရိပ်သာလမ်း၏အခြေစိုက်စခန်းမှာအများပြည်သူရေချိုးခန်းရှိပါတယ်။
ကရမေလမြစ်ပြည်နယ်ကမ်းခြေသွားရောက်လည်ပတ်တန်ဖိုးရှိနောက်ထပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒေသခံကမ်းခြေ။ ဤသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အဖြူရောင်သဲ cove ပုရမေလတောင်မြစ်၏အခြေစိုက်စခန်းအနှံ့တဦးတည်းမိုင်အဘို့အပြေး။ ဒါဟာငှက်အစက်အပြောက်များနှင့်သဘာဝချစ်သူများအဘို့ကြီးစွာသောရာအရပျရဲ့ဒါပန်းခြံဒေသခံ waterfowl များအတွက် protected Wetlands ဂွပါဝင်သည်။ Dogs ကိုခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်ကြောင့်ငှက်ခိုလှုံရာသူတို့ On-leash ထားရှိမည်ရမည်ဖြစ်သည်။
ကရမေလ-by-The-ပင်လယ်ပြင်၏တည်ထောင်သူဥရောပတွင်ရေပန်းစားနေရာများအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခြင်းနှင့်သေးငယ်တဲ့ဥရောပကျေးရွာတူဖို့အသိုင်းအဝိုင်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအမျိုးစုံရမြို့လယ်၌ဝှက်ထားလျက်လမ်းကြားနဲ့အနုပညာပြခန်း, စပျစ်ရည်ကိုအရသာခန်း, စျေးဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်ကဝိုင်းပါဥယျာဉ်တော်တန်တိုင်း၏ပြည့်ဝ၏။ ကရမေလ, သူတို့မြို့လယ်စာတိုက်မှာသူတို့ရဲ့မေးလ်ဖွင့်ကောက်သည့်အခါဒေသခံများကိုနေ့ရက်တိုင်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားသို့ပြေးကြလိမ့်မည်သို့မှသာထုံးစံထိန်းသိမ်းထားငယ်လေးတစ်မြို့မှာအဘယ်သူမျှမအိမ်သူအိမ်သားဂဏန်းရှိပါတယ်။ လိပ်စာများလမ်းဆုံအဖြစ်ပေးအပ်ထားတယ်, ဒါကြောင့်မခေါ်သို့မဟုတ်လမ်းညွန်များအတွက်မေးမြန်းဖို့ကိုပြင်ဆင်ရလိမ့်မည်။ ကရမေလရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့လမ်းကြားနှင့်က hidden ဖို့အတွက် walkway ဆုံးရှုံးခဲ့ရရကပျော်စရာပါစေ။
အဆိုပါရမေလတောင်မစ်ရှင် Basilica သွားရောက်ကြည့်ရှု
Pgiam / E ကို + / Getty Images
အဆိုပါရမေလတောင်မစ်ရှင် Basilica (မစ်ရှင် San Carlos Borromeo del ရီယို Carmelo) ကယ်လီဖိုးနီးယားသမိုင်းအတွက်အရေးပါသောနေရာအရပ်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ 1770. ဒါဟာခမညျးတျော Junipero Serra ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင့်သူသည်မိမိနောက်ဆုံးရက်ပေါင်းနေထိုင်တဲ့တဦးတည်းရဲ့ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအပေါငျးတို့သအထက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားမစ်ရှင်၏ဒုတိယဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသမိုင်းဝင်ဝင်းနှင့်မစ်ရှင်ခိုင်ခိုင်လုံလုံတစ်နှစ်ပတ်လုံးသွားရောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သောနေရာများဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါမစ်ရှင်ယင်းဒေသ၏သမိုင်းကြောင်းနှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားမစ်ရှင် network ထဲသို့ကြည့်ပေးသော On-site လေးပြတိုက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါဟင်နရီ Downie ပြတိုက်ပြခန်းပုရမေလတောင်မစ်ရှင်ရဲ့ပွနျလညျထူထောငျအလုပျ၏သမိုင်းဝေမျှပေးသည်။ အဆိုပါ Munras မိသားစုအမွေအနှစ်ပြတိုက်နှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်မစ်ရှင်၏သမိုင်းနှင့် Monterey ဒေသအတူနေတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဒေသခံမိသားစုတစ်စု၏သမိုင်းကိုဝေမျှပေးသည်။ အဆိုပါ Jo Mora Chapel ပြခန်းအနုပညာပြပွဲလှည့်အဖြစ်အနုပညာရှင်ရဲ့အံ့မခန်း Serra သတိရအောက်မေ့ Cenotaph တစ်စီးရီးအိမ်ရှင်အဖြစ်။ အဆိုပါ Convento ပြတိုက်သူ 1784 ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်သွားဘယ်မှာခမညျးတျော Junipero Serra ရဲ့လူနေမှုရပ်ကွက်, အားဖြင့်သင်တို့ကြာပါသည်။
hours & သို့ဝင်ရောက်ခြင်း: နေ့တိုင်း 7:00 pm အချိန်သည်အထိ 9:30 pm တွင်ဖွင့်ပါ။ အဆင့်လက်ခံရေး: လူကြီးများအတွက် $ 6,50, Senior များအတွက် $ 4.00, ကလေးများအသက်အရွယ်7နဲ့ဖွင့်ဘို့ $ 2,00 ။ ဝန်ခံချက်ကလေးများအသက်အရွယ်6နှစ်အောက်များအတွက်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ self-guided များနှင့် docent ဦးဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကရမေလမစ်ရှင် Basilica, 3080 ရီယိုလမ်း, ရမေလတောင်, ကာလီဖိုးနီးယား - ဝက်ဘ်ဆိုက်
ကရမေလစပျစ်ရည်ကိုအရသာသွားကြဖို့နေရာကောင်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ မြို့လယ်ကရမေလလူအပေါင်းတို့သည်ရွာကိုဖြတ်ပြီးတိုတောင်းတဲ့တမိုင်လမ်းလျှောက်အတွင်း 20 ကျော်ကဒေသခံဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအရသာခန်းရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားမြို့လယ်အရသာအခန်းပေါင်းသင်အလွယ်တကူအကောင်းဆုံးကိုဒေသခံ Monterey, စန်းနီတိုကိုအမြည်းအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, တစ်နေရာတည်းတွင် Santa Cruz ကောင်တီဝိုင်ကြကုန်အံ့။
မြည်းစမ်းအခကြေးငွေအပေါ်ကယ်ဖို့, တစ်ဦးကရမေလဝိုင်လမ်းလျှောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ($ 65) ဖွင့်ကောက်။ ဒီအလျှော့စျေးလက်မှတ် set ကိုသင် 14 ပါဝင်ကွဲပြားခြားနားရမေလတောင်မျိုးစုံမြည်းစမ်းအခန်းပေါင်းမဆို9ရက်မျိုးစုံမြည်းစမ်းပျံသန်းမှုကိုအမြည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်ပင်, မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူမျိုးစုံမြည်းစမ်းပျံသန်းမှုခွဲကွဲပြားခြားနားသောရက်သူတို့ကိုအသုံးချသို့မဟုတ်ပင် (သူတို့6လဝယ်ယူပြီးနောက်သက်တမ်းကုန်ဆုံး) သင်၏နောက်ခရီးစဉ်အဘို့ထိုသူတို့ကယ်တင်နိုင်ပါ။
သငျသညျ (5th &6အကြား San Carlos အပေါ်) သို့မဟုတ်ကသူတို့ရဲ့ website သို့ပေါ်တွင်ရမေလတောင်ကုန်သည်ကြီးများဧည့်သည် Center ၌ကရမေလဝိုင်လမ်းလျှောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။
Highlights ကိုရမေလတောင်ရဲ့အအစားအစာနှင့်စားသောက်ဆိုင်မြင်ကွင်းတစ်ခု၏ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်ကြိုးစားရန်တစ်ကရမေလစားနပ်ရိက္ခာခရီးစဉ်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်။ ဒါဟာသုံးနာရီပဲ့ထိန်းအစားအစာလမ်းလျှောက်မြို့လယ်ကရမေလ၌ဝှက်ထားလျက်ရှိသောလမ်းကြားမှတဆင့်အသင်းသားများနှင့်အကောင်းဆုံးရမေလတောင်စားသောက်ဆိုင်, စျေးဆိုင်များနှင့်စပျစ်ရည်ကိုအရသာခန်းအများအပြားမှာရပ်လိုက်နိုင်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီမှတ်တိုင်မှာ, သင်စားသောက်ဆိုင်အထူးများထဲမှကြိုးစားထားတဲ့ကျွမ်းကျင်သူလမ်းညွှန်ကနေဒေသခံထိုးထွင်းသိမြင်ရလာအောင်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ လက်မှတ်တွေ $ 69 မှာ start နှင့်သင်ရမေလတောင်စားနပ်ရိက္ခာ Tours မှ website တွင်သူတို့ကိုမဝယ်နိုင်ပါ။
သင့်ရဲ့ခွေးမပါဘဲနေအိမ်စွန့်ခွာမနေပါနဲ့! ကရမေလကသင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဘို့အနီရောင်ကော်ဇောထွက်လှိမ့်ပါလိမ့်မယ် - မြို့မကြာခဏ America မှာအများဆုံးခွေး-ဖော်ရွေမြို့ rated ဖြစ်ပါတယ်။ Dogs ကို (နှင့်အမျိုးမျိုးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ) အများဆုံးမြို့လယ်ဟိုတယ်များ, စျေးဆိုင်များနှင့်ပင်အချို့သောစားသောက်ဆိုင်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ ကောင်းပြီ-ပြုမူခွေးကရမေလသဲသောင်ပြင်များနှင့်မစ်ရှင်ပန်းခြံလူ့အဆိုပါမြို့လယ်မှာ Off-leash run ဖို့ခွင့်ပြုနေကြတယ်။
သောက်စရာအထူးနှင့်တိုက်ရိုက်ဂီတများအတွက်ညနေ6သည်အထိ 4:30 pm တွင်ထံမှ Lounge မှာသင့်ရဲ့ခွေးနှင့်ညစဉ်ညတိုင်းခွေး-friendly "Yappy နာရီ" နဲ့မိုးလုံလေလုံထမင်းစားခန်းများအတွက်ကျပအင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သေချာစေပါ။
ဒေသခံအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် Boutique Diggidy ခွေးအရည်အသွေးမြင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, ရယူထားသော, အဝတ်အစား, ကလေးကစားစရာများနှင့်ထို့ထက် ပို. အတူလြှံမပြည့်စုံသည်။
တဦးတည်းဇာတ်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြိုက်ဆုံးကရမေလဟိုတယ်အဆိုပါ Hofsas အိမ်ဟိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထွန်းတောက်ပန်းရောင်စပျစ်သီးကို-ပုံစံမျိုးဟိုတယ် Bavaria အတွက်တည်ထောင်သူရဲ့ခရီးသွားမှတ်တမ်းအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခြင်းနှင့်မြို့ရဲ့ဥရောပဗေဒသို့ကိုက်ညီခဲ့သည်။ အဆိုပါမိသားစု-run ဟိုတယ်အဆိုပါ Monterey ဂလားပင်လယ်အော်သို့မျက်နှာပြုချွတ်ရှာဖွေနေလသာဆောင်တွေနဲ့အများအပြား 38 ထူးခြားသောခန်းနှင့်အစုံရှိပါတယ်။ အဆိုပါဟိုတယ်ကိုသင်သည်သင်၏အခန်းကိုပြန်ယူအားပေးခဲ့ကြသည်တဲ့တိုက်ကြီးနံနက်စာပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါဟိုတယ်ကိုအလွန်အမင်းခွေး-ဖော်ရွေသည်နှင့်တစ်ဦးခွေးအိပ်ရာ, ရယူထားသောနှင့်ခေါက်ခရီးသွားပန်းကန်အပါအဝင်တစ် doggie ကြိုဆိုအထုပ်ပေးပါသည်။
ရုံသမုဒ္ဒရာရိပ်သာလမ်း၏ခြေရင်းနားမှာတစ်ဦးကခေတ်မီကမ်းခြေ-မှုတ်သွင်းအကြိုက်ဆုံးသည်, Lamplighter အင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် Boutique ဟိုတယ်ဖွင့် 11 ခန်း, အစုံနှင့်အိမ်တွင်းရှိပါတယ်။ ဤသည် Lamplighter တစ်ညစဉ်ညတိုင်းစပျစ်ရည်ကိုအရသာပျော်ရွှင်နာရီ, ပြင်ပမီးတွင်းနှင့်ကရမေလသဲသောင်ပြင်မှအနီးဆုံးလမ်းလျှောက်ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါဟိုတယ်ကိုခွေး-ဖော်ရွေသည်နှင့်ခွေးအိပ်ရာ, ရယူထားသောနှင့်ကစားစရာများအပါအဝင်တစ် doggie ကြိုဆိုအထုပ်ပေးပါသည်။
ကရမေလကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်ပိုမိုဟိုတယ်များအဘို့အ TripAdvisor ထွက်စစ်ဆေးပါ။
အခြားအကယ်လီဖိုးနီးယားစပျစ်ရည်ကိုတိုင်းဒေသကြီးများ, အရမေလတောင်ချိုင့်များ၏လှိမ့တောင်ကုန်းသို့ 12 မိုင်အရှေ့ကရမေလ၏ဦးခေါငျး၏လူအစုအဝေးမပါဘဲတစ်ဦးထက်ပိုသောအစဉ်အလာကိုစပျစ်ရည်တိုင်းပြည်အတွေ့အကြုံကိုသည်။
ဒီကျေးလက်နေအသိုင်းအဝိုင်း၏ဗဟိုပုရမေလတောင်ချိုင့်ကျေးရွာ, တစ်ဒါဇင်ကျော်သောစပျစ်ရည်အရသာခန်း, စျေးဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်နှင့်အတူငယ်လေးတစ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြစ်ပါတယ်။ ငါ၏အမကြာသေးမီခရီးစဉ်တစ်ခုမှာအကြိုက်ဆုံးသူတို့ရဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အိမ်ခြံမြေ-စိုက်ပျိုး pinot အဆိုးမြင်အန္တရာယ်နှင့်အိမ်လုပ်သံလွင်ဆီအဘို့, Holman Ranch (19 အရှေ့ကရမေလချိုင့်လမ်းမ) ဖြစ်ခဲ့သည်။
လမျး၌သို့မဟုတ်ထွက်တွင် Earthbound လယ်တွေခြံမှာရပ်တန့်လတ်ဆတ်တဲ့ဒေသခံအသီးအနှံနှင့်ကျန်းမာအော်ဂဲနစ်စားဘို့ (7250 ကရမေလချိုင့်လမ်း) ရပ်။
ဘေးထွက်ခရီးစဉ်: 17 မိုင် Drive ကို
ရုံမြောက်ဘက်ရမေလတောင်သဲသောင်ပြင်၏ 17-မိုင် Drive ကို, ပစိဖိတ် Grove နှင့် Monterey ဂလားပင်လယ်အော်ပေါ်တွင်သီးသန့် Pebble သဲသောင်ပြင်အသိုင်းအဝိုင်းဖြတ်သန်းမယ့်သာယာလှပလမ်းမှဝင်ဝဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ drive ကိုပွေ့ဖက်နာမည်ကြီးကျပအပါအဝင်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်နှင့်အချည်းနှီးသော, အဖြူရောင်သဲသောင်ပြင်, စိမ်း coves နှင့် Monterey ကျပသစ်ပင်, ဖြတ်သန်းကမ်းရိုးတန်း။ အဆိုပါလမ်း Pebble Beach တွင် Resort ကိုကပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထားပုဂ္ဂလိကသေဆုံးသူလမ်း ($ 8.75) ဖြစ်ပါသည်။
အထဲက Check ဒီလမ်းညွှန် 17 မိုင် Drive ကိုအပေါ်မြင်လုပ်ဖို့ပိုပြီးအရာများအတွက်။
ဘေးထွက်ခရီးစဉ်: Big Sur
ကရမေလကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးဘဏ္ဍာကိုတဦးတည်း, ဝေးလံခေါင်ဖျားလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် Big Sur ၏ကြမ်းတမ်းကမ်းရိုးတန်းမှတဆင့်တစ်ဦး drive ကိုအဘို့ကြီးစွာသောခုန်ချွတ်အမှတ်စေသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့အကွေ့အကောက်များသောကမ်းရိုးတန်းအဝေးပြေး 1 တလျှောက်တွင်ဤသည် drive ကိုမကြာခဏကမ္ဘာပေါ်မှာအလှဆုံး drives တွေကိုများထဲမှစဉ်းစားသည်။ သင်ကလမ်းဖွင့်အများအပြားသာယာလှပ Vista အချက်များမှာရပ်တန့်, အဝေးပြေး 1 ရက်နေ့ကနေဖို့, ဒါမှမဟုတ်ဒေသ၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာပန်းခြံစူးစမ်းဖို့ချွတ်ရနိုင်ဖြစ်စေ။
အဘယ်မှာရှိ Mavericks Surf ပြိုင်ပွဲတွင် Watch မှ
လူ့အဖွဲ့အစည်းတခု - Ponderosa Ranch
စန်းလူး Obispo အတွက်ဂေး-Friendly ဟိုတယ်ဖို့ကိုလမ်းညွှန်
အဆိုပါ Luna Park ကမြေဖြူတွေသုံးပြီးအနုပညာပွဲတော်
အဘယ်မှာရှိ Reno အတွက် Basque အဘိဓါန်စားနပ်ရိက္ခာကိုရှာပါရန်
နောဖပြည်၌အတွက်အကောင်းဆုံး Ice Cream အရောင်းဆိုင်များ
ဒီ Valentine Day ကိုသင့်ရဲ့ Sweeties သွန်သင်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများ
ပဲရစ်မှာ 2016 သတိပေးချက်များ: တိုးရစ်ကိုသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ
တိုရွန်တိုအတွက်အဲဒီ 8 အမှား Make မနေပါနဲ့
သင့်ရဲ့အူကိုးစားလော့ Digestive ကျန်းမာရေး & အဆိုပါ Spa
MSc Divina - အတွင်းပိုင်း
Moving ္တု၏ သာ. ကောင်း၏ဓါတ်ပုံများကိုယူလုပ်နည်း